Nepali - Worldnews Network
भारतीय न्युज च्यानलमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राख्छौः प्रवक्ता खतिवडा
नेकपा काभ्रेमा अध्यक्ष र सचिव नआएको भन्दै भित्तामा टाँसियो ध्यानाकर्षण पत्र
स्कुलमाथि वामपन्थ विचार फैलाइरहेको ट्रम्पको आरोप
वासिङ्टन, (एजेन्सी) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी स्कुलमा कट्टर वामपन्थी भावना सिकाइ भइरहेको आरोप लगाएका छन् । अमेरिकाको मिनियापोलिसमा एक अश्वेत नागरिक जर्ज
बहुविवाह मुद्दामा प्रक्राउ पर्दा कोरोना
पर्वत, (नेस) संक्रमित महिला र उनका श्रीमानका विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बहुविवाहको उजुरी दर्ता भयो । प्रहरीको खोजी सूचीमा
सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका-१, सिसुवाखोलामा पहिरो जाँदा सात घर बगाएको छ । पहिरोले बगाएर ११
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–६ रिखकी ३३ वर्षीया हीरा जुग्जालीको शुक्रबार बिहानै कोदो रोप्न बारीमा जाने योजना उज्यालो हुन नपाउँदै खसेको पहिरोले पूरा हुन दिएन । “बिहानै मेलामा जाने योजना थियो । जेठी छोरी र छोरा मसँग थिए”, हीराका श्रीमान् धनबहादुरले भने, “अर्को कोठामा सुतेका दुई छोरी र श्रीमतीलाई तान्दातान्दै पहिरोले बगायो ।” पहिरोमा भाग्ने क्रममा घाइते भएर बेनी अस्पतालमा उपचार
कोरोना भाइरस संक्रमणले विदेशमा नेपालीको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जनाएको छ । एनआरएनएको
चिच्याइरहेँ ! लेदोले बगाइरह्यो : मगर
अघिल्लो दिन खेतबारीको कामले अति थाकेपछि रातभर एक निद्रा पनि नब्युँझी २६ गते बिहानै आँखा खुले । बिहान भीषण वर्षा भइरहेको थियो । त्यति बेला बिहानको ७ बजेको थियो । भीषण वर्षाका कारण बिहान रात परेको जस्तै भएको थियो । भीषण वर्षाले चारैतिरका पहाडमा पहिरो जाला जस्तो भएको थियो । सधैँ पानी परिरहने
संक्रमितदर घट्यो, बितेको २४ घण्टामा कुन देशमा कतिको मृत्यु ?
विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । छोटो समयमै ठुलो रुप लिएको कोरोनाबाट अहिलेसम्म १ करोड २८ लाख ४१ हजार संक्रमित भैसकेका छन् । यस्तै, ५ लाख ६७ हजार ६ सय २७ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । वर्ल्डोमिटरका अनुसार ७४ लाख ७८ हजार उपचारपछि निको भएका छन् । विश्वको २१३ देशमा फैलिएको कोरोनाबाट थोरै देश मात्र यसबाट बच्न सकेका छन् । यस भाइरस गत
नेपालमा सलह पुनः आउने सम्भावना
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपालमा भारत हुँदै सहल अझै प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेकाले त्यसमा सतर्क र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । असार १४ गते नेपाल प्रवेश गरेका सलह फाट्टफुट्ट रूपमा मात्र देखिएकामा अर्को झुन्ड आउने सम्भावना पनि बढ्दै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा आएको सलह
नेपाल समाचारपत्र, पर्वत कोरोनाको पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिर्पोट आएर घर फर्केकी पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाकी एक महिलामा दोस्रोपटक गरिएको परीक्षणमा कोरोना
अस्पतालबाटै अभिनेता बच्चनले गरे यस्तो आग्रह
एजेन्सी । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि मुम्बईको नानावटी अस्पतालमा
पिरिम नलाउनेपछि गलबन्दी पच्छ्यौरी
युट्युबमा हालसम्म नै सर्वाधिक धेरै हेरिएको पिरिम नलाउनेको म्युजिक भिडियोको सफलतापश्चात् गायक आशिष सचिनको अर्को प्रस्तुति गलबन्दी पच्छ्यौरी सार्वजनिक गरिएको छ। पिरिम नलाउने समूहकै सहभागितामा गलबन्दी पच्छ्यौरी तयार
मिला दरै, तनहुँ भारतबाट चार दिनअघि आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । यही असार २३ गते भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका पुरुषको उपचारका अस्पताल लैजाँदै गर्दा शनिबार बिहान
मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार डाक्टर पक्राउ
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न चार डाक्टर पक्राउ परेका छन् । अवैध रुपमा
खस्यौली । रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकास्थित फायरलाइनमा बलेरो जिप दुर्घटनामा एक जनाको
संखुवासभामा पहिरोले सात घर पुरियो, ११ बेपत्ता
न्युज अफ नेपाल, संखुवासभा । संखुवासभाको सिलिचोङ
बीसीजी प्रयोग भएका देशमा कोरोना मृत्युदरमा कमी
भर्जिनिया, (एजेन्सी) कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बचाउन र उपचार गर्न खोप तथा औषधीको खोजीमा वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन् । यसबीच क्षयरोग (टीबी)का लागि प्रयोग हुँदै आइरहेको शताब्दीऔं पुरानो औषधी बीसीजीबाट कोरोनाका कारण मृत्यदरलाई कम गर्ने आशा जागेको छ । पछिल्लो एक अध्ययनले अमेरिकाजस्तो विकसित देशको
रसियाको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा ‘सहायक श्रीमान’ छनौट
भूूपराज बस्याल, काठमाडौं । नेपालको लोपोन्मुख बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र फिल्म ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड) रसियाको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनौट भएको छ । आगामी अगष्ट २७ देखि २९ सम्म रसियामा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कान्स भिडियो फेस्टिबलमा नेपालबाट ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)
नेपाली चलचित्र कलाकार संघले कलाकारबीचको विवादमा कसैलाई गाली गलौज नगर्न आग्रह गरेको छ। संघका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता मोहन निरौलाले
अमिताभको भिडियो सन्देशः भगवान अचेल सेतो कोट लगाएर अस्पतालमा काम गरिरहेका छन्
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएपछि मुम्बईस्थित नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन उपचाररत छन् । अभिनेता
उचाइदेखि डराएका वास्तविक स्पाइडरम्यान
बेइजिङ, (एजेन्सी) चीनको दक्षिणी गुआंगडोंग प्रान्तको झोंगसान शहरमा एकजना पुरुष एउटा आवासीय भवनको छैठौं तल्लाको भित्तामा
Nepali Radio Stations: